आउने भयो बंगलादेशबाट मल, सम्झौताका लागि काे जाँदैछ ? — Imandarmedia.com
आउने भयो बंगलादेशबाट मल, सम्झौताका लागि काे जाँदैछ ?
काठमाडाैं । नेपाल सरकारले बंगलादेशबाट मल ल्याउने भएको छ। जिटुजी मार्फत उक्त मल ल्याउन लागिएको हो। सम्झौताको लागि भोलिनै कृषि सामाग्री कम्पनीका प्रतिनिधि बंगलादेश जान लागेको कृषि मन्त्रालयका सचिव यागेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए।
‘हामी तयारीको अन्तिम चरणमा छौं, टिकट मिले कृषि सामाग्रीका प्रतिनिधि भोलि नै बंगलादेश जाँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने। उनकाअनुसार सम्झौता भएको १५ दिन पछि नेपाल मल भित्रन सुरू हुने छ।
सरकारले जिटुजीमार्फत् ५० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने भएको हो। सो परिमाणको मलले आगामी असारमा धानमा टप ड्रेसिङ गर्नसम्म पुग्न सचिव कार्कीले बताए। मन्त्रालयले आगामी दिनमा किसानलाई मलको अभाव नहुने गरी गृहकार्य गरिरहेको उनले दाबी गरे।
‘हामी मल अभाव हुन नदिन रोड म्याप तयार गरिसकेका छौं, अब मलको अभाव हुँदैन,’ उनले भने। हाल कृषि सामाग्री कम्पनीसँग २२ हजार टन युरिया र ९ हजार टन पोटास मौज्दात छ। त्यसैगरी, साल्ट ट्रेडिङसँग युरिया १८ हजार र डिएपी १६ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै भारतीय रिजर्व बैंकले भोलिदेखि २४ सै घण्टा रियल टाइम ग्रोस सेटलमेन्ट (RTGS) को सुविधा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सेवा १ डिसेम्बर राति १२:३० बजे देखि सेवाग्राहीका लागि उपलब्ध हुनेछ । डिजिटल कारोबार गर्ने व्यक्तिका लागि यसले प्रत्यक्ष फाइदा पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
बैंकले आरटीजीएस सुविधा १ डिसेम्बरदेखि दिनको २४ सै घण्टा उपलब्ध हुने घोषणा गरेको हो । यसको अर्थ सेवाग्रहीले अब उपरान्त आरटीजीएसमार्फत कुनै पनि समयमा पैसा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछन । यसपश्चात् भारत ती देशहरूको सुचीमा समावेश हुनेछ, जहाँ आरटीजीएस सुविधा २४ सै घण्टा उपलब्ध छ ।
आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले कोरोना युगमा अनलाइन लेनदेनमा उल्लेखनीय वृद्धि भएकोले आरबीआईले आरटीजीएस सुविधा २४ सै घण्टा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।